Recorder က APK ကို Capture | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » Recorder ကို Capture - ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ, Screen Recorder
Recorder ကို Capture - ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ, Screen Recorder APK ကို
Capture အ Recorder မျက်နှာပြင်ဗီဒီယိုများဖမ်းယူနှင့် Youtube, Facebook နှင့် Twitter ပေါ်တွင်မျှဝေဖို့ screen ကိုဗီဒီယိုများဖန်တီးရန်ဗီဒီယို Recorder နှင့်ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာတစ်ဦး Screen Recorder ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအကောင်းဆုံးအခမဲ့ HD မျက်နှာပြင်အသံဖမ်း, ဗီဒီယိုအသံဖမ်းနှင့်ဂိမ်းများ, ဗီဒီယိုများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, ဗီဒီယိုချတ်နှင့် app များကိုဗီဒီယိုအယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမအမြစ်လိုအပ်, ရေပေါ်င်းဒိုးသတိပေးချက်ဘား, စခရင်ပုံနှင့်ဖန်စီဗီဒီယိုတည်းဖြတ် tools များကဲ့သို့အ features တွေနှင့်အတူဖန်သားပြင်ဗီဒီယိုများမျက်နှာပြင်အသံဖမ်းအတွက်လူတိုင်းအတွက်ကိုဖန်ဆင်းရန်လွယ်ကူများမှာ။ ဗီဒီယိုကိုအသံဖမ်းနှင့်အတူဖန်သားပြင်ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးပါ။ ဖမ်းယူအသံဖမ်းစုံလင်သောမျက်နှာပြင်အသံဖမ်းသင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်အသက်တာကိုဖမ်းဆီးဖို့ Make.အားသာချက်များ:
FULL HD ဗီဒီယို: 1080p
စံချိန် & အလွယ်တကူဗီဒီယိုကိုအသံဖမ်းနှင့်အတူပေါ်ပြူလာဂိမ်းများကိုဖမ်းယူ။ တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်မှာလည်းဖန်သားပြင်အသံဖမ်းအတွက်လျင်မြန်စွာဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးယူကျု့ဗီဒီယိုကိုအသံဖမ်းနေလျှင်သင်စိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုများနှင့်စခရင်ပုံဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
-Record / တစ်ဦးကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူ 1 စက္ကမျက်နှာပြင် Capture ။
မည်သည့် screen ပေါ်မှာဖမ်းဆီးဖို့ -Control ဗီဒီယိုကိုအသံဖမ်း။
-Record / qucikly အကြောင်းကြားစာဘားနှင့်အတူဖန်သားပြင်ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးပါ။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုများ -Create နှင့်အတူ 1080 p အတွက် Full HD ဂရပ်ဖစ်.
-Record / screen ကိုမှတ်တမ်းတင်စဉ်အတွင်း MIC သံကို Capture ။
မျက်နှာပြင်အသံဖမ်းအတွက်လဲ tutorial များအတွက်အသုံးအနှုနျးမြားကိုဖမ်းယူဖို့ရှေ့ကင်မရာ -Enable ။
အဆိုပါ cam -Zoom နှင့်ဗီဒီယိုအသံဖမ်းနှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုရွှေ့။
-ဗီဒီယိုကိုချုံ့: ဗီဒီယိုများ၏အစ / အဆုံးသတ်ရေးအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်ယူပါ။
-အလယျပိုငျး Remove: ဗီဒီယိုများ၏အလယ်တွင်ဖျက်ပစ်ပါ။
-Music ကို Add: အများအပြားဗီဒီယို Recorder ပေါ်မှာရရှိနိုင်အွန်လိုင်းအသံဖိုင်သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ဗီဒီယိုများဒေသခံဂီတထည့်ပါ။
ဗီဒီယိုကို recorder.- အတွက်မှော်သက်ရောက်မှု -Use
-Screen Recorder ကိုသင့်ရဲ့ videos.- လှုပ်ရှားဖို့ Funny စတစ်ကာများကမ်းလှမ်း
video recording သင်ကြည့်ရှုဖို့ခွင့်ပြု ဂိမ်းတိုက်ရိုက်လွှ! ဗီဒီယို Recorder အပေါ်စူးစမ်းဖို့သင်တို့အဘို့အထူးထူးအပြားပြားကို up-to-date ဖြစ်အောင်ဂိမ်းရှိပါတယ်! တိုက်ရိုက်လွှဂိမ်း Watch နှင့်ဖမ်းယူအသံဖမ်းနဲ့လိုလားသူဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ!
မျက်နှာပြင်အသံဖမ်းနှင့်အတူပေါ်ပြူလာဂိမ်းတိုက်ရိုက်စီးနှင့်အတူတက် -Keep ။
Instagram ကို, Facebook, YouTube ကတဆင့်ဝေမျှဖို့ screen ကိုအသံဖမ်းမှတစ်ဆင့်အများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်လေး -Record ။
ဗီဒီယို Recorder နှင့်အတူ YouTube ကတဆင့် -Subscribe ။
Capture အ Recorder လည်းစခရင်ပုံကိုဖမ်းယူနိုင်သည်! တဦးတည်းကလစ်ဖြင့် Video Recorder နှင့်အတူ screenshot ။
-Take တစ်ဦး One-click နှိပ်ပြီးမျက်နှာပြင်ပုံ အဆိုပါအကြောင်းကြားစာဘား / မျောပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
စခရင်ပုံတည်းဖြတ်ရန် -Use တည်းဖြတ်ရေးကိရိယာများနှင့် ရှယ်ယာစခရင်ပုံ စသည်တို့ကို Snapchat, Instagram ကိုမှ
Screen Recorder နှင့်အတူ -Quickly ဖမ်းယူစခရင်ပုံ။
*cool ကို Magic အကျိုးသက်ရောက်မှု*
Capture အ Recorder အများအပြားမှော်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဗွီဒီယိုတစ်ခုအသံဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပျော်မွေ့ သိပ္ပံ-Fi ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ စသည်တို့ '' Flame ဟာ ',' မှော်စွမ်းအင် ',' ပေါက်ကွဲ ',' လေဆာ Cannon ',' ဗုံး 'နှင့်အတူ!
-Control မီးမိုဃ်းချုန်း, ရေနှင့်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ် ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ကမှော်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူချင်သည်။
သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုများ -Make စိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင် ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ။
*အကွိမျမြားစှာရုပ်ပြောင် & စတစ်ကာများ*
များသော ရုပ်ပြောင် & စတစ်ကာများ သငျသညျရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်ဗီဒီယိုကိုအသံဖမ်းအတွက်များမှာ!
-Add ရုပ်ပြောင် & စတစ်ကာများစုံလင်သောဗီဒီယိုများနှင့်စခရင်ပုံစေ။
-Cute ရုပ်ပြောင် & စတစ်ကာများကိုသင့်ဗီဒီယိုများနှင့်စခရင်ပုံလှုပ်ရှားပုံများ။
*ဗီဒီယိုများ Play & Share*
-Play & ရှယ်ယာဗီဒီယိုများနှင့်တွင်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစခရင်ပုံYoutube, Facebook, Instagram ကို, etc ဗီဒီယိုကိုအသံဖမ်းမှတဆင့်။
installation ကို -After, တဦးတည်းကိုထိပုတ်ပါမှတ်တမ်းတင်ကိုသက်ဝင်ဗီဒီယိုအသံဖမ်း၏အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဝင်းဒိုးကို -Floating အသံဖမ်း, ဗွီဒီယိုနဲ့ setting ကို, စခရင်ပုံနဲ့ camera function ကိုပေါင်းစပ်။
Download များနှင့်ယခုကြိုးစားပြီး! developer များပံ့ပိုးပေးရန်5★★★★★ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်! သင်သည်မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်ရှိပါကမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် recorder.video.magic@gmail.com။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Recorder ကို Capture - ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ, Screen Recorder
20.74 ကို MB
Recorder ကို Capture
ဖမ်းယူရေး: Screen ကို ...